Sing - Malay - Indo | GO & GO Travels
မြန်မာ - စင်္ကာပူ - အင်ဒိုနီးရှား - မလေးရှား
( ၇ ရက် / ၆ ည ) ခရီးစဉ်
Tours Cost by USD ( per person )
Yangon - Sin- Indo-Malay
ပထမနေ့းရန်ကုန် - စင်္ကာပူ ( ညနေစာ )
ရန်ကုန်မြို့မှ စင်္က်ာပူနိုင်ငံသို့ နေ့လည်ပိုင်း လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။ စင်္က်ာပူလေယာဉ်ကွင်းသို့ ရောက်လျှင် အဆင်သင့်စောင့်ကြိုနေသောကားဖြင့်၊ တဆက်တည်း ဃငအပွှသကမ အနေဖြင့်စတင်လည်ပတ်ပါမည်။ လည်ပတ် မည့် နေရာများမှာ – သြကညအ င်္ဘေနမ ။ နြမူငသည ဏမေု ။ င်္သကညအငေည သ်ျွှနေူအ့ –ှကညအနခ ဃငအပယ ဏမေူငောနညအံသကျနယ နျစူညေေိန . တို့ကိုလည်ပတ်ပြီးနောက်၊ ညနေစာကို စားသုံးပါမည်။ ညနေစာကိုသုံးဆောင် ပြီးနောက်၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ထွက်ခွါပါမည်။ စင်္ကာပူတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ဒုတိယနေ့းစင်္ကာပူ -့ ညငလနမျှေူအကိငသ င်္ကူီူပွှေသကမ ( နံနက်စာ/နေ့လည်စာ/ညနေစာ )
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက် တနေ့တာလည်ပတ်မှုအစီအစဉ်ကို နံနက် (၉း၃ဝ)တွင် စတင်ပါမည်။ ယနေ တွင် ပထမဦးဆုံီးငောသညှိုညိကျအမပ ရံမေဘသကမာမေအ များသို့ ပျေိာပျော်ပါးပါး ဈေးဝယ် လည် ပတ် ကြည့်ရှုကြပြီး နောက်၊ နာမည်ကျော့် ညငလနမျှေူအကိငသ သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ (ြူခေု ဥကအိအေနါ် နြနိ အသ သမိနမိအေနိ အငခုနအျ ငညေိလညေခန – သြည မန်ကညိဘေူန) (သစနညငညါ့ သကမျ ၁ဝော -၇ စာ) (ူကညခ့ မေမညေါနာနညအ ငညျငိန့ ညငလနမျှေူအကိငသျ). ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နာမည်ကျော် ဆန်တိုဆာကျွန်း ရှိ လှပသော ရေပန်းအကများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ပြီးနောက် (ှသညါ သ် အ့နျနေ )၊ ဟိုတယ်သို့ပြန်၍ တနေ့တာလည်ပတ်မှုကို အဆုံးသတ်ပါမည်။
တတိယနေ့းစင်္ကာပူ - ဘာတန်( နံနက်စာ/နေ့လည်စာ/ညနေစာ )
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ ထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ၊ နံနက် ( ၈း၃ဝ ) တွင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက် ကြိုဆိုကာ စင်္ကာပူံမေဘသမ်မသညအ ဃနညအမန ရှိ ဗျနာဘူန သို့ သွားပါမည်။ ပြီးနောက် ဘသမေိငညါ ဈျေ လုပ်ပေးပါမည်။ ( ၉း၅ဝ ) တွင် အန်းဘတ် လေအေးစက်ပါအမြန် ဖယ်ရီဘုတ်ဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၊ ဘာတန် ကမ်းခြေသို့ထွက်ခွါပါမည်။ ရေတက်ရေကျ ပေါ်မူတည်ပြီး၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ စံတော်ချိန် နံနက် ( ၉း၁ဝ )ခန့် တွင်ျွှအေနမ င်္မသညအ သမှနုကစညှေါုညအနမညအေငသညေူ င်္နမမပွှနမာငညေူ သို့ရောက်ပါမည်။ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဂိတ်နှင့် အကောက်ခွန်ဂိတ်များကိုဖြတ်ပြီးနောက်၊ ဘာတန်ရှိ တိုးဂိုက်မှ လာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ ( ၁ဝး၁ဝ ) အချိန်ခန့် တွင်လေဆိပ်မှထွက်ခွါကာ တဆက်တည်း၊ ဘာတန်ရှိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တွင်သာမက၊ အရှေ့ တောင် အာရှတွင်ပါအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကိုသွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ( ၁ဝး၃ဝ )ခန့် တွင် ဘာတန် ၏ နာမည်ကျော်ီမပ မြေုနအ င်္သသှိအေ် မြေုနအ များသို့ လေ့လာလည်ပတ်ပြီး၊ှုညေ ငြူငျယ့ိညေါုနမငညါယုနမကစကုယ နြူငညသြ ကဲ့ သို့အင်ဒိုနီးရှားနာမည်ကျော်အစားအစား ခြောက်များကိုဈေးသက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်ရန်ပို့ ဆောင်ပေး ပါမည်။ ( ၁၁းဝဝ )တွင် နာမည်ကျော် ပိုလိုအဝတ်အထည်အစစ်များကိုမှရချင်သောသူများအတွက် ဏသူသျွေူစူ့ကေမနည ကိုလိုက်လံ ပို့ ဆောင်ပေးအုန်းမှာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် ဘာတန်နာမည်ကျော် ပြသညပေ ကိတ်မုန့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ဈေးကို ပို့ ဆောင်ပေးအုံးမှာဖြစ်ပါသည်။ နေ့ လည်စာကို ပင်လယ်စာစားသောက် ဆိုင် တွင် ပင်လ်၏ အလှကိုခံစားရင်း ပင်လယ်စာဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမှာဖြစ်ပါသည်။ နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ပြီး နောက် နာစသမငကာ ဃသူနခအငသညယ ဏနုသညါ ဃ့ငညနျနွှနာစူနယ ဥကအူနအြေူ်သမ အြေငု ( အင်ဒိုနီးရှား ပါတိတ်နှင့် အဝတ်အထည်များ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ တီရှပ်များ၊ နာရီများ) ဝယ်ယူနိုင်ရန်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေး မှာဖြစ်ပါသည်။ တနေကုန်လည်ပတ်ဈေးဝယ်လေ့လာကြပြီးနောက်၊ အင်ဒိုနီးရှားရိုးရာ မာဆတ် ကို ၂ နာရီခန့်အနှိပ်ခံရန်ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ပြီးနောက်၊ ဘာတန်ရှိခေတ်မီရှော့ပင်းမောသို့ လည်ပတ်ဈေးဝယ် ကြပါမည်။ (၁၇း၄၅ )အချိန်ခန့် တွင် ညနေစာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ ပို့ ဆောင် ဃ့နခု ငည လုပ်ပေး ပါမည်။ တနေ့ တာပင်ပန်းမှုများကိုအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
စတုတ္ထနေ့း ဘာတန် - စင်္ကာပူ – မက်လက္ကာ ( နံနက်စာ/နေ့ လည်စာ/ညနေစာ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာစားသုံးပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ ဧည့်လမ်း ညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ စင်္ကာပူ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ စင်္ကာပူဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်လျှင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျဟိုးဘာရူမှတဆင့်မက်လက္ကာသို့ထွက်ခွါပါမည်။ မက်လက္ကာသို့ ရောက်လျှင် နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပြီးနောက် မက်လက္ကာမြို့ တိုးခရီး စဉ်ကိုစတင်လည်ပတ်ကြရာတွင် ထင်ရှားသောနေရာများဖြစ်သည့် သစ်တောဟောင်း၊ ချောင်ဟွန်ဘုရားကျောင်း၊ ဗညအငဆကနှအမနနအယ ကြုငအ ဃ့ငညေ ယှ. ဏကွေျူနာငေည တို့ ကိုလည်ပတ်ပြီးနောက် ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ပြီးနောက် ညနေစာသုံးဆောင်ကာ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အနားယူကြပါမည်။
ပဉ္စမနေ့း မက်လက္ကာ - ကွာလာလမ်ပူ – ဃငအပွှသကမ ( နံနက်စာ/နေ့ လည်စာ/ညနေစာ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာစားသုံးပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ ဧည့်လမ်း ညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ကွာလာ လမ်ပူမြို့ သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ွှတငညွှသတနမ ( သမ ) ဏနအမသညျွှေသတနမ ရှေ့တွင် ဓါတ်ပုံရိုက်ရန် ရပ်နားပေး မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပျော်ပျော်ပါးပါးအမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ ပြီးနောက် ကွာလာလမ်ပူမြို့ တော်တိုးခရီးစဉ် ကိုလည်ပတ်ကြရာတွင် ဏမေူငောနညအံသကျနယ အြေငသညေူ သြညကာနညအယ ညအေငသညေူ ကျြနကာ.ှုညိနစနညိနညအှဆကမေနယုငညါ စေူခေနယွနှာ့သစယ ညေိူသခေူ ဏမသိကခအ စသည်တို့ တွင်လည်ပတ်ဈေးဝယ်ကြပြီးနောက် ညနေစာသုံးဆောင် ကာ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
ဆဌမနေ့း ကွာလာလမ်ပူ - ဂျန်းတင်း ( နံနက်စာ/နေ့ လည်စာ/ညနေစာ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာစားသုံးပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ ဧည့်လမ်းညွှန် မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး လေးရှား နိုင်ငံ၏ တစ်ခု တည်းသော ကာစီနိုကစားဝိုင်းဖြစ်သည့်ွနညအငညါံငါူ့ညျေိ သို့ ဃဘေူန ဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။ွနညအငညါံငါူ့ညျေိ ရှိ ကာစီနိုကစားဝိုင်းများ၊ွှ့နာန ဏမေု ဥယျာဉ်တွင် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာကစားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသည်။ွနညအငညါံငါူ့ညျေိ တွင် ညအိပ်ပါမည်။
သတ္တမနေ့း ဂျန်းတင်း - ကွာလာလမ်ပူ -ီနစမေအကမန ( နံနက်စာ )
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာစားသုံးပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ၊ ကွာလာလမ်ပူသို လေဆိပ်သို့ထွက်ခွါပါမည်။
ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လေယာဉ်ကွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်၊၊
*** Below 10 pax : Combi with English Speaking Driver cum Guide (in stead of Coach & Guide) ***
Visa fee and visa service
International air ticket ( Ygn – Sin - KL - Ygn )
Myanmar tour leader
Entrance Fees as mentioned in itinerary / -
Accommodations (Twin/Triple Sharing) at hotel for5Nights (with breakfast)/ -
Entrance Fees as mentioned in itinerary –Song of the Sea in Singapore.
Porter age for hotel in / out -
Daily one bottle mineral water per person
Passenger's departure fee and fuel surcharge of S$20/pax from Singapore
payable to ferry operator upon collection of boarding pass.
Guide and driver tipping of $2/pax per day during City Tour.
Beverages & Laundry service /
Child age from 3-12 years old without bed 60% of Adult fare
Child age from 3-12 years old with an extra bed 80% of Adult fare
Infant age below3years old is F.O.C